ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား...! - Thadin
HomeNEWSရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား…!
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား…!
February 12, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား…!
၁၂.၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၂း၁၀) အချိ်န်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက်၊ နောင်ရိုးလမ်းနှင့်၁၂၆ လမ်းထောင့်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် Level 1 ယာဉ်အုပ်စုများ ထွက်ခွာငြှိမ်းသတ်လျှက်ရှိပါသည်။
မီးလောင်ရာသို့ တိုင်းဒေကြီးကိုယ်စားလှည်များဖြစ်ကြသော ဦးလှဌေး ဦးရန်အောင်နင့် မြို့နယ်အလုပ်အမူဆောင်များရပ်ကျေးအမူဆောင်များ ဝန်းရံလုပ်အားပေးခဲ့ကြပါသည် ။
သန်းကျော် ( ခ ) အော်စကာ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
၁၂.၂.၂၀၁၉ ရကျနေ့၊ (၁၂း၁၀) အချြိနျခနျ့၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ မင်ျဂလာတောငျညှနျ့မွို့နယျ၊ သပွကေုနျးရပျကှကျ၊ နောငျရိုးလမျးနှငျ့၁၂၆ လမျးထောငျ့တှငျ မီးလောငျမှုဖွဈပှားကွောငျး သတငျးရရှိသဖွငျ့ Level 1 ယာဉျအုပျစုမြား ထှကျခှာငွှိမျးသတျလြှကျရှိပါသညျ။
မီးလောငျရာသို့ တိုငျးဒကွေီးကိုယျစားလှညျမြားဖွဈကွသော ဦးလှဌေး ဦးရနျအောငျနငျ့ မွို့နယျအလုပျအမူဆောငျမြားရပျကြေးအမူဆောငျမြား ဝနျးရံလုပျအားပေးခဲ့ကွပါသညျ ။
သနျးကြျော ( ခ ) အျောစကာ သတငျးနှငျ့ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ
မင်ျဂလာတောငျညှနျ့မွို့ နယျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ
အမှန်တကယ် မိန်းမ နိုင်နည်း ၆နည်း…!
” နီးကပ်လာသော တဘောင်နှစ်ခု ”
Total Users : 536072
Total views : 2425261